Izimoto zokwakha ze-LENA Worxx - iSearch
Qala Baby & Child amathoyizi Izimoto zokwakha LENA Worxx
Ungu-boss esakhiweni sokwakha!
Ngomthwalo we-LENA Worxx wesondo, ungavula isayithi lakho lokwakha kokubili ogwini nasendlini, eklinikeni noma esitokisini. Imoto yokwakha inikeza amathuba amaningi futhi kumnandi kakhulu, kungakhathaliseki ukuthi yedwa noma ndawonye nabangani bakho. I-wheel loader yi-Liebherr ethembekile i-L538 Litronic futhi mayelana ne-48cm eside.
Ukuze ujabule ngokuphephile, yenziwe ngepulasitiki ephezulu yekhwalithi futhi inezinsimbi ezimbili zensimbi ezixhunyiwe ze-6mm. Lena yindlela kuphela yokuqinisekisa ukuzinza okuphelele, okwenza kube lula ukuphakamisa nokuthutha isanti. Ngengalo ende ye-15cm, nebhekheni elikhulu elinamathele ekupheleni kwalo, ungahambisa izinto zokwakha kusuka endaweni eyodwa kuya kwenye emsebenzini wakho. Ngaphezu kwalokho, i-loader nayo iyafaneleka ukumba izimbobo ezidingekayo kusayithi.
Ngosayizi we-approx. 16 x 8 x 7 cm, ibhakede likhulu ngokwanele ukuphatha yonke imisebenzi esakhiweni sakho kalula. I-LENA Worxx wheel loader isenzelwe ngokukhethekile ukudlala esihlabathini noma kwezinye izindawo. Ngenxa yalokhu une-Radlerarm eguquguqukayo, engabuye ivalwe endaweni efunayo. I-LENA Worxx cab ingasetshenziswa futhi ukusiza ukuqondisa. Lokhu kwenza ukuqondisa okuqondile futhi ungakwazi ukushayela imoto yakho ngqo lapho kudingeka khona.
der I-LENA Worxx isondo lesithwele kufanelekile izingane ezingaphezu kwe-3 iminyaka futhi ingasetshenziswa kokubili ngaphandle nangaphakathi. Kujabuliswa okhethekile lapho usebenzisa imoto yokwakha esitokisini. Lapha unayo impahla yokwakha, ongayithutha kalula, ubeke futhi ulayishe uphinde ulayishe nge-wheel loader. Ngakho uba ngumqashi endaweni yakho yokwakha futhi ube nethuba lokuguqula ibhulogi lehlabathi libe yindawo yokwakhiwa ngosizo lomfaki wefosholo. I-LENA Worxx nayo ibonisa ukubaluleka okukhulu ekwenzeni ukudlala kwakho kube mnandi njengokuphephile. Ngakho-ke, umfaki wefosholo ukhiqizwa e-EU futhi uqinisekiswe yi-TÜV.
Akukho lutho lokumisa i-gameplay yakho, thatha umthwalo wesondo lakho LENA Worxx futhi unqobe isitifiketi sesanti, ibhishi noma i-nursery yakho. Zizwa njengomsebenzi wangempela wokwakha bese ubeka ithoni kusayithi lakho yokwakhiwa. Thola amathuba amaningi okusebenzisa i-LENA Worxx wheel loader futhi uzuze emisebenzini. Ngamasondo ayo amakhulu, ungayithatha noma ikuphi futhi udlale ngokuzungezile indawo yakho. Bobabili emhlabeni, kanye nenhlabathi ensimini noma esihlabathini ebaleni lokudlala, umthwalo wefosholo uyasetshenziswa kalula. Manje yazi imikhiqizo yomfaki wefosholo futhi wakhe isayithi lakho lokwakha! I-LENA Worxx wheel loader izokunika ukusekelwa okugcwele. Jabulela!
Ukushayela ugandaganda epulazini lakho!
der I-LENA Worxx ugandaganda ikukhombisa indlela yokuphila epulazini. I-Deutz-Fahr i-Agrotron 7250 TTV ithrekhi ene-front loader, ukuze ukwazi ukusingatha ngisho nemisebenzi evelele kakhulu epulazini lakho. Ngamathayi amakhulu amakhulu nokwakhiwa okuqinile, ugandaganda ulungele ukusetshenziswa kwendlu yangaphakathi kanye nokusetshenziswa ngaphandle. I-LENA Worxx itektala yenziwe ngepulasitiki eqinile futhi inezinsimbi ezimbili zensimbi ezixhunyiwe ze-6mm, eziqinisekisa ukuthi isikhathi eside futhi sijabulise ngisho nangaphansi kwemithwalo esindayo. Ngakho-ke kulula kakhulu ukugcwalisa ifosho yogandaganda ogwini noma kwi-sandbox ngesihlabathi nezinye izinto. Ngakho-ke uyakwazi ukusebenzisa itektala ukwenza imisebenzi edingekayo epulazini lakho.
Njengoba ubukhulu be-45 x 19 x 21,7 cm, ugandaganda ubukhulu obuhle bokukusiza ngomsebenzi wakho wepulazi. Ngenxa ye-16 x 8 x 7 ibhakede elincane, ungakwazi kalula ukuthutha ubuningi, ishlabathi noma umhlaba. Ingalo yangaphambili yokugubha i-front loader iqinisekisa ngobude be-19cm esimweni esandisiwe. Kokubili ibhakede langaphambili, kanye nengalo yokulayisha, ungaguqula emazingeni ahlukene futhi nakanjani uvale. Lokhu kukuvumela ukuthi usebenzise i-LENA Worxx ugandaganda ngezindlela ezihlukahlukene futhi wenze kahle umsebenzi owufunayo. Ungayisebenzisa kokubili ekhaya ku-nursery yakho, ngaphandle kwe-sandbox noma ngisho nasebe lolwandle. le ithayi elikhulu vumela ngisho nokushayela ezindaweni ezingalingani.
I-LENA Worxx ugandaganda ifanele izingane eminyakeni engaphezu kwe-3 futhi ikhiqizwa ngokudlala imidlalo ephephile e-EU futhi iqinisekiswe yi-TÜV. Njengoba ukwakhiwa kwayo okuqinile, usayizi wetiktala kanye nomklamo othembekile, ugandaganda oluhlaza unamandla okuba yiqhawe lakho epulazini lakho noma ngisho nendawo yakho yokwakhiwa. Vumela ukuklama kwakho kugijime futhi uthole imisebenzi eminingi kanye namathuba we-LENA Worxx ugandaganda. Zivumelanise ngemisebenzi eminingi yemidlalo kanye nesethulo esinamandla semoto futhi wazi indawo odlalayo ngokudlala. Ngogandaganda ungaqala ipulazi lakho, ukushayela izinkomo ekuseni noma isitokisi phezulu ensimini ngesikhathi sokudla kwasemini. Ibhakede le-front eliqinile likwazi ukuphatha ngisho nemisebenzi ewusizo kakhulu, njengemithwalo eningi yesihlabathi, ukuphakamisa nokwehla, nokuhamba.
Ipulazi lakho, kanye ne-LENA Worxx ugandaganda, kuyoba injabulo enkulu, kungaba yedwa noma nabangani. Esikhathini esilandelayo, thatha ugandaganda ogijimayo ebhokisini le-sandbox, funda ngezinketho ezintsha, uphinde uhlole ukuthi ugandaganda ukukunikezani ngezici zalo. Sifisela wena kumnandi kakhulu!
Isihloko sangaphambiliniuwoyela linseed
Isihloko esilandelayouwoyela lemon